Siiqqee - Wikipedia
Seerri siinqee ulee qal'oo sorooroo muka harooressaa irraa muranii tolchan, kan dubartiin heerumte qabattuun ibsama. Mukti harooressaa qaqal’aa fi sorooroo wanta qabuu fi kan laayyootti hin cabne waan ta’eef filatama. Siinqee dheerina dubartii qabattu akka gitutti muru. Siinqeen akka diimatee bareedu baaxii manaa jala bakka aara argatutti suuqu. Siinqee akka uleetti hin fayyadaman, horii ittiin hin haleelan. Yeroo qabatan illee akka dhadhaabbataatti hin fayyadaman.
Dubartoonni siinqee qabatanii gurumuudhaan sirna hawaasummaa fi amantaa heddu wanta raawwataniif siinqeen waraana dubartii ti jedhu.
1 Siinqeen Idaayyiif Kennamuu
2 Ulfina Haadha Siiqqee
3 Aangoo Haadha Siinqee
3.1 Dhaanicha Abbaa Warraarraa Baraaruu
3.2 Lola dhaabuu
3.3 Daa’ima guddifachuu
Siinqeen Idaayyiif Kennamuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Haati intala heerumsiistu, siinqee, boraatii fi baarree qopheessiti. Siinqeen mallattoo birmadummaa (uumamaan bilisa ta’uu) ti. Boraatiin muka irraa soqamee tolfamee, calleedhaan faayame immoo mallattoo haadha-warrummaa ti. Baarreen qodaa aannanii waan ta’eef mallattoo qabeenyaa ti.
Cidha gaa’elaa irratti yeroo idaayyichi idaayyittii fudhatee galuuf ka’u, haati ishii siinqee, boraatii fi baarree harkatti qabattee, balbala fuula dura teessi. Idaayyichi haadha idaayyittii bira ga'ee dhaabbata. Haati idaayyittii "hoo baarree, hoo barsee" jettee siinqee, boraatii fi baarree itti kenniti. "Hoo barsee" jechuun yaboo sirra keewwadhee jechuu dha.
Hamaamonni oggaa qe’ee ga’u, idaayyichi siinqee, boraatii fi baarree idaayyittiitti kenna. Idaayyittiin seera hirma furaa booda, siinqee boraatii fi baarree qabattee ol seentee gola ishii keessi. Kanumaan haadha siinqee taati. Yeroo eebbisanillee "siinqee baarree oofkalaa" jedhu. Kunis fuudha kana nagaadhaan keessa fulla’aa ykn ofkalaa jechuu dha.
Siinqee seeraan kenname kanaan mirga haadha-warrummaa ishiin qabdu ittiin tikfatti. Hawaasa keessattis dubartoota siinqee qaban waliin gurmuu uummatanii seera adda addaa ittiin raawwachiisu.
Ulfina Haadha Siiqqee[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Dubartoonni siinqee qabatanii wal faana yaa’an/bayima ba’an, Ateetee/Ganyaa jedhamu. Dubartoonni bayima ba’anii, siinqee faarfachaa deemanitti yoo dhufan, nama tokkoos ta’e nama hedduus ta’an, maanguddoonillee, fardarraa bu’anii, gadi jedhanii marga jiidhaa ciratanii “Ilteeninnaa” jedhanii itti irreeffatu. Dubartoonnis akkasuma marga ciratanii itti irreeffatanii “obbayaa” jedhanii deebisu. Dubartoonni bayima ba’an, otoo isaan hin eebbisiin nama isaan qaxxaamure ari’anii qabanii adabu.
Aangoo Haadha Siinqee[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Dhaanicha Abbaa Warraarraa Baraaruu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Sirni Gadaa, seera siinqeetiin, mirgi dubartoota Oromoof kenne, kan ittiin mul’atu keessaa tokko, dubartii abbaa warraatiin dhaanamteef, dubartoota gurmuu uummataniin birmannaa godhamu.
Sagaleen dubartii dhaanamte bakka dhaga’ametti, mallattoo wal waamichaa kan ta’e sagalee ililfannaa, “ililii,ililii,ililii…” jedhu wal dhageessisanii walii qaqqabu. Akka seera siinqeetti, dubartiin sagalee ililfannaa dhageesse, kan daa’ima hoosisaa jirtus, kan sa’a elmitus, kan okkotee ibiddarraa qabduus, hojii of harkaa qabdu battalatti dhiistee, siinqee ofii luqqifattee, hatattamaan birmachuuf dirqama qabdi. Dubartoonni seera siinqee raawwachiisuuf gurmuun deeman, weedduu siinqee weeddifachaa mana dubartii abbaan warraa dhaane sana qaqqabu. Dubartoonni dura qaqqaban, dubartii sana siinqee qabachiisanii manaa baasu.
Namicha haadhawarraa isaa dhaane dabalatee, dhiirti haati warraa isaa gurumuu kana keessa jirtu hundi, qe’een isaa adiyyoo dha. Bultiin abbaa hin qabu. Daa’imni ni booya. Kanaafiyyuu dhiirti marti namicha balleessaa hojjate sana murtiitti dhiyeessuuf carraaqa. Dubartoonni, miseensa isaanii miidhamte itti marsanii, faaruu isaanitiin roorroo didaa, gara caffee/Mana maree Gadaa/ erga seerri Gadaa laaffatee booda jaarsolee gosaatti iyyata deemu.
Qaamni itti iyyatan, waltajjii qabaniifii, ulfina isaanitiif jecha, ofirra taa’anii dubbisu. Kana malees, gadi jedhanii marga jiidhaa ciratanii, “ilteeninnaa” jechuun itti irreeffatu. Dubartoonnis “hobbayaa” jedhanii eebbisu. Yeroo seera kana raawwatan, weeddudhaan siinqee faarsuu hin dagatan.
Qaamni himannaa isaanii dhaga’uuf taa’e, “Wayyooma/ulfina dubartii kan tumaadhaan dhugoomse Gadaa dha.” Jechuun seera jiru mirkaneessuudhaan, waltajjii jalqabu. Sana booda, “ulfoo teenya maaltu bade, maal rakkattan” jedhanii dubartoota gaafatu. Dubartiin gurmuu kana gaggeessitu, dubartii dhaanamte of fuuldura qabdee, waan ishii irratti raawwatame caffee fi yaa’iitti himti. Qaamni seera raawwachiisu, nama miidhaa kana raawwate, waamanii dhiyeessanii, dubbii qoratu. Hanga murteen kennamutti, dubartoonni, roorroon akka irraa dhaabbatu weedduudhaan gaafatu.
Xumura irratti caffeen, miidhaa qaqqabe madaalee, murtee dabarsa. Murteen kun loon inni qabu keessaa isa mararsiifatu sangaa/qotiyyoo isaa qaluu ta’uu danda’a. Seerri siinqee murtee kana raawwachiisee, dubartoonni sangaa qalame yaa’iidhaaf laatanii, weedduu isaanitiin siinqee faarfachaa, dubartii dhugaa argatte sana manaan ga’anii, mana mana ofitti galu.
Birmannaan akkanaa, dubartii qanafaa addarraa qabdu/ kan deessee ji’a jahaa hin guunneef/ malee, dubartii abbaan warraa dhaane hundaafii miti kan jedhan jiru. Akka manguddoo irraa dhageenyeetti , erga sirni Gadaa laaffatee booda birmannaan akkanaa, deessuu dhaanamteef qofa ta’e malee, dur dubartii hundaaf birmatu. Kan deessuu dhaane adaba isaatu guddaa dha.
Lola dhaabuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Gosa Oromoo gidduutti, walitti bu’iinsi uumamee, lolli hamaan/waraanni ka’ee, namni wal miidhe, dubartiin oduun lolaa kun dura, gurra bu’e, ililfattee, dubartoota bakka hallee dammaqsiti. Gurmuun dubartootaa, oduu waraanaa kana darbaa walii dabarsanii, siinqee qabatanii battalatti walga’u.
Weedduu isaanitiin siinqee weeddisaa gara lafa lolaatti oggaa deeman, Waaqa siinqeedhaaf aangoo kana kenne faarsu. Iddoo lolaa sanatti wayta dhiyaatan immoo weedduu isaanii keessa, waraanni akka dhaabbatu maqaa Waaqaatiin gaafatu. Bakka lolaa sana yoo ga’an siinqee isaanii faarfachaa, lolli akka dhaabbatu gaaftu. Kanaan yoo dhaabbachuu dide, gidduu seenu. Waraana hamaa attamii illee yoo ta’e, seera kana bira hin darbu. Battalatti dhaabbata. Siinqeen meeshaa araaraa ti.
Daa’ima guddifachuu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Warri ilmoo hin arganne, warri ilma hin qabne, fira irraa yookaan nama michuu ta’uuf irraa ilmoo guddifata. Dubartiin dhala hin qabne, seera guddifachaan ilmoo guddifachuu barbaadde, siinqee qabattee, aannan ciicoodhaan fuutee warra irraa guddifattu sana dhaqxi.
Warri ilmoo irraa guddifachuuf filatan warra ijoollee baay'ee hore. Warri akkanaa, dubartii siinqeedhaan dhaqxee ilmoo isaan irraa guddifachuuf gaafatteef, ilmoo isaanii kennuuf dirqamu. Dubartiin siinqeedhaan deemtu hinqoltu/hindhabdu.
Seera Siinqee - Waaqeffannaa, dhumarratti kan baname, Mudde 10, 2014
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Siiqqee&oldid=37135" irraa kan fudhatame